အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ - MyBiz Myanmar
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲက တစ်မျိုးပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူဘယ်သူ ဆိုတာ ဖုံးကွယ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပေးဖို့ လှည့်ဖျားတောင်းခံတာမျိုးပေါ့။ ဒီနေ့ ခေတ်အခါမှာတော့ လှည့်ဖျားဖို့ ကြိုးစားသူတွေရဲ့ နည်းစနစ်က အရမ်းကို အဆင့်မြင့်လာလိုက်တာ လိမ်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ပုံစံတွေက သိပ်ကို ယုံချင်စရာ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ မသိရင် ကိုယ်အမြဲ ချိတ်ဆက်သုံးနေတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က ဝန်ဆောင်မှု ပုံစံမျိုးလို့တောင် ထင်ရတဲ့အထိဆိုတော့ အွန်လိုင်း သုံးတဲ့သူတွေအတွက် တစ်ကယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပေါ့။
သူတို့ လှည့်ဖျားတဲ့နည်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ စာပို့တာ၊ အီးမေးလ်ပို့တာ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အကောင့်တုသုံးပြီး ပို့စ်နဲ့ စာတွေ ဖြန့်တာအပြင် ဝက်ဘ်ဆိုက်အတု သုံးတာမျိုးအထိ ပါပါတယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ လူလိမ်တစ်ယောက်ဟာ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလိုလို၊ ကိုယ့် အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်လိုလို ပုံဖမ်းပြီး အကြွေးဝယ်ကတ်နံပါတ်နဲ့ စကားဝှက်ပေးဖို့ စာတစ်စောင် ပို့ပြီး တောင်း တာမျိုး လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့တောင်းတာ ပေးလိုက်မိရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတော့မှာပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ခိုးယူတဲ့ပုံစံ အများစုက လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အပေါ် ပစ်မှတ်ထားပြီး အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ လုပ်မိအောင် လှည့်စားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
– သတ်မှတ် အချိန်တွင်းသာ ရနိုင်မယ့် မယုံနိုင်စရာ အထူးလျော့ဈေးနော်! ကိုယ်တအားကြိုက်တဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုက မယုံနိုင်စရာ လျော့ဈေးတွေ ပေးနေပြီလို့ စာတစ်စောင် ရလာတယ် ဆိုပါတော့။ စာထဲမှာ ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကိုနှိပ်ပါဆိုပြီး အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် အတုရဲ့ လင့်ခ်တစ်ခု ပါနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ ဝက်ဘ်ဆိုက်အတုကို ရောက်သွား တာမျိုး၊ ကိုယ့်စက်ထဲက အရေးကြီးအချက်အလက်ကို နှိုက်ယူနိုင်လောက်အောင် အန္တရာယ်ရှိ တဲ့အရာကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မိလိုက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လိမ်ချင်တဲ့ စာတွေက တစ်ခုခုကို အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်း တတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အကြွေး ဝယ်ကတ် နံပါတ်နဲ့ စကားဝှက်လိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပေးဖို့ တောင်းတတ်ပါတယ်။
– အကူအညီ တကယ်လိုနေလို့ ကူညီပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်! ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ဆီက အရေးပေါ် ငွေလိုနေလို့ဆိုပြီး တောင်းတဲ့ စာတစ်စောင်ပုံစံမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာပြန်မိပြီဆိုရင် ကိုယ်စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ငွေလွှဲခိုင်းတာ၊ သူတို့ တစ်ခြားမှာ သွားလိမ်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပြောခိုင်း တာမျိုး လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ လူအများကြီးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောချင်တာမျိုး၊ မသင်္ကာစရာ ရှည်လျား ထွေပြားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာမျိုး တွေကို သတိထားပါ။
– အိုး… မင်းက သိပ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ! ကိုယ့်ကို အယုံသွင်းဖို့ စကားလုံး လှလှလေးတွေ သုံးထားတဲ့ စာတစ်စောင် တစ်ယောက်ယောက်က ပို့လာပါတယ်။ သတိထားပါ။ အဆုံးသတ်မှာ ကိုယ့်ကို ငွေလွှဲခိုင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင်က ကံထူးရှင်ပါပဲ! ထီဆုကြီး ပေါက်လို့ အကြောင်းကြားပါတယ်ဆိုတဲ့ စာတစ်စောင်မှာ လှည့်ကွက်တစ်ခု ပါနေတတ်ပါတယ်။ ဆုထုတ်ချင်ရင် အသင်းဝင်ကြေး၊ ဘာကြေးညာကြေး ပေးရမယ် ဆိုတာမျိုး၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းတာမျိုး လုပ်ခိုင်းပါ လိမ့်မယ်။ ဒီလို လိမ်တဲ့စာ အများစုက စကားလုံးပေါင်းအမှား၊ ဝါကျပုံစံ မမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီနာမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကို မှားပေါင်းထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် လင့်ခ်အတု သုံးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ www.lottery.com အစား www.1ottery.com လို့ ရေးထားတာမျိုးပါ။
– အကောင့်ဟက်ခ် ခံရပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကူညီပေးမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခု ဖျက်သိမ်းခံရတယ်။ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ အကြောင်းကြားတစ်စောင် ရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းလို့ စာပို့တဲ့သူတွေက ပြန်ယူပေးနိုင်တယ်ပေါ့ … ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေသာ ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့။
လှည့်ဖျားခံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကင်းဝေးစေမယ့် နည်းလမ်းများ
အခုပြောပြမယ့် အခြေခံ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေက လှည့်ဖျားသူရဲ့ ထောင်ချောက်ကနေ ကင်းလွတ် စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
– အကောင့်ထဲဝင်တဲ့ စကားဝှက်ကို တခြားတစ်ယောက်ကို လုံးဝ မပြောပြပါနဲ့ – Facebook က အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီး သုံးတဲ့သူရဲ့ အကောင့်စကားဝှက်ကို လုံးဝ တောင်းမှာမဟုတ်သလို စကားဝှက်တစ်ခုကို ဖိုင်နဲ့တွဲပြီး ပို့ပေးမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် အကောင့်ထဲဝင်တဲ့ အချက်အလက်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြသင့်ပါဘူး။
– အပြင်မှာ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်း မခင်သလို friend requests ကို ချက်ချင်း လက်မခံ လိုက်ပါနဲ့ – လူလိမ်တွေက အကောင့်တုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သတင်းစဉ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာမှာ မဟုတ်မမှန်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပြသဖို့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်သလို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
– ကိုယ့်အကောင့်ကို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းတစ်ခုလို ထိန်းသိမ်းပါ – စကားဝှက် ပုံမှန် ပြောင်းနေပါ။ ဒါမှ လူလိမ်တွေ ကိုယ့်အကောင့်သုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု၊ အသိမိတ်ဆွေတွေဆီကို လိမ်လည်ဖို့ မဆက်သွယ်နိုင်မှာပါ။
– ကိုယ့်အကောင့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပုံမှန် ပြန်စစ်ပြီး မယုံကြည်ရတဲ့ ရင်းမြစ်တွေကို ဖယ်ရှားပါ – ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ဝင်ရောက်မှုမှတ်တမ်းကို ပြန်စစ်ပြီး မသင်္ကာစရာ ဝင်ရောက်မှုတွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ ဂိမ်းတွေကနေ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေ ရယူနေလဲဆိုတာလည်း စစ်ဆေးပါ။ အသုံးမလိုရင် ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
– Facebook ရဲ့ ထပ်တိုး လုံခြုံရေး နည်းပညာကိရိယာတွေကို အမြဲ စစ်ဆေးပါ – သံသယဖြစ်စရာ ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ update တွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အကောင့်လုံခြုံရေးကို နှစ်ဆတိုးလိုက်ပါ။ Facebook ရဲ့ လုံခြုံရေး နည်းပညာကိရိယာတွေက ထပ်တိုး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– Facebook ကို တိုင်ကြားပြီး အရေးယူပါ – အီးမေးလ်၊ Facebook ကနေပို့တဲ့ စာတစ်စောင်က ကြည့်ရတာ ပုံမှန် မဟုတ်ရင် ပါလာတဲ့ လင့်ခ်၊ ဖိုင် ကို မဖွင့်ပါနဲ့။ [email protected] ကို တိုင်ကြား လိုက်ပါ။ စကားအပြန်အလှန်ပြောထားတာကို တိုင်ကြားချင်တယ်ဆိုရင် မဖျက်ပစ်ခင် screenshot ရိုက်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘက်က စာတွေ ဖျက်ပစ်နိုင်ပေမယ့် တခြားသူရဲ့ inbox ထဲက စာတွေကို မဖျက်ပစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ။ Facebook ပေါ်က အများ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တိုင်ကြားဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းက လင်ခ့်ပေးပို့ တိုင်ကြားခြင်း ပါပဲ။ လင်ခ့်ပေးပို့ တိုင်ကြားခြင်း ကို အဲဒီ့ စာစုနားမှာပဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
– သူငယ်ချင်းအကောင့် ဟက်ခ်ခံရပြီလို့ ထင်ရင် သူ့ကို အသိပေးပါ – အကောင့်တစ်ခု ဟက်ခ်ခံရပြီဆိုရင် Facebook က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Facebook ရဲ့ Help Centre မှာ အကူအညီ တောင်းနိုင်ပါတယ်။
– နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းနဲ့ ဘဏ်ကို အကြောင်းကြားပါ – အလိမ်ခံရပြီလို့ သိလိုက်တာနဲ့ နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပါ။ ကိုယ့်အကြွေးဝယ်ကတ် အချက်အလက်တွေ မှားပေးလိုက်မိရင် ဘဏ်၊ ကတ်ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါ။ လိမ်တဲ့သူရဲ့ အကောင့်ကိုလည်း Facebook မှာ တိုင်ကြားထားပါ။
MyBiz Myanmar2020-03-05T14:26:39+06:30March 5th, 2020|World|